မဖြူဖြူသင်းနဲ့ အဆက်သွယ်များရှိရင် ကူညီလိုက်ကြပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » မဖြူဖြူသင်းနဲ့ အဆက်သွယ်များရှိရင် ကူညီလိုက်ကြပါ
မဖြူဖြူသင်းနဲ့ အဆက်သွယ်များရှိရင် ကူညီလိုက်ကြပါ
Posted by etone on Feb 1, 2011 in Health & Fitness |9comments
AIDS & HIV ရောဂါရှင်တွေကို ရှာပေးလိုက်ကြပါ
message : 1Hello,
To all experts on HIV/AIDS
May I greet you and send the information to you about the new therapy for HIV/AIDS.
I am Mr Maha Mar Mot,aherbalist, from Burma and now stay in Thailand.
I also would like to discuss with you the affective medicine made from herbal plants and warmly invite you to cooperate with me in the process of treating patients if you convince that.
I have searched this medicine for decade of years. I started my treatment on HIV/AIDS in 2002 and to this date I have successfully cured some fourteen patients in Thailand Border who are suffering from HIV/ AIDS seriously.
I already informed what I have found on my own experience, to the physicians nearby and to the institutions of clinical research on HIV/AIDS around the world.
Unfortunately, nobody has been interested in my claim. I want to show my best experience, even if someone gives me halfachance.
For more information please contact the following emails;
Lubo601@mail.com , marmot.nupo@gmail.com
Mr Maha Mar Mott
message:2ဆိုတဲ့စာကိုရတဲ့အခါ ကျမက ဤသို့စာပြန်လိုက်ပါတယ် ။
အင်္ဂလိပ်လို တစ်မျိုး ၊ မြန်မာလိုတစ်မျိုးနဲ့ မရိုးနိုင်အောင်ပါလားဗျို့ ။
ရင် သူဌေးဖြစ်ကိန်းရှိတယ်နော် ။
အစမ်းသဘောလေးနဲ့ မဖြူဖြူသင်း ဦးစီးလုပ်နေတဲ့ ဂေဟာကလူ တစ်ယောက်၊ နှစ်ယောက်လောက် အရင်ပျောက်အောင် ကုကြည့်ပါဦး ။ ။
message :3 ကျနော်တို့ဖြစ်ချင်နေတာလည်း ဒီလိုမျိုးပါပဲ။
ဖြစ်နိုင်ရင် လူနာအယောက် ၂၀ လောက်ကို လူသိရှင်ကြား တရားဝင်ကုပြချင်တာပါ။
ခုထိတော့ ဘယ်သူမှ၊ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှ မဆက်သွယ်ကြသေးပါဘူး
ဒါကြောင့် ဒေါ်ဖြူဖြူသင်းနဲ့တော့ တွေ့ဖို့မလွယ်ဘူးဖြစ်နေတယ်
တယောက်ချင်းစီကို ကိုယ်စါးရိတ်ကိုယ်စိုက် ကုခဲ့ပြီးပါပြီ
ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖြစ်အောင် တရားဝင် ကုချင်လို့ပါ။ ခုလို စာပြန်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။
ကဲ ရွာသူရွာသားထဲကများ မဖြူဖြူသင်းတို့ ဂေဟာနဲ့ အဆက်ဆံရှိလျှင် သတင်းပေးလိုက်ကြပါဦး ။ မြန်မာနိုင်ငံက လူတစ်ယောက် တစ်ကယ် HIV ကုနိုင်တယ်ဆိုရင် ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်မိမှာပါ ။
NLD website ကနေပြောရင် မဖြူဖြူသင်းနဲ့ ဆက်သွယ်လို့ ပိုမလွယ်ဘူးလား။ တဆင့်သိတဲ့ လူတစ်ယောက်တော့ ရှိတယ်။ စုံစမ်းကြည့်အုံးမယ်။ တကယ်ပျောက်ရင် လူနာတွေအတွက် ၀မ်းသာစရာပေါ့။
မဟားမာမွတ်တော့ .. တခါးတည်း .. ဆေးပညားနိုဗဲဇု တန်းရသွားမှာ..။
ပါးစပ်ကတော့ လူတိုင်းပြောတတ်ပါတယ် ။ တကယ်ဟုတ်မဟုတ်ပဲ စမ်းကြည့်တာပါ …။ အဆက်သွယ်လေးများရှိရင် ကူညီပေးလိုက်ကြပါ ။ NLD website ၀င်ကြည့်ပါတယ် သူတို့ကို ဆက်သယ်နိုင်တဲံ feedback မပြောနဲ့ တစ်ချို့ tag တွေတောင် စုံအောင် စာမျက်နှာပေါ် မတင်နိုင်သေးပါဘူး ။
ဂျာမနီနိုင်ငံကတော. 95% ထိအောင်မြင်နေပြီလို.ပြောတာဖတ်ရဘူးတယ်
နည်းနည်းမူးလာရင် လမ်းကြောင်းက ခပ်ကောက်ကောက်ရယ်
တကယ်ဟုတ်ရင်တော့အထူးဝမ်းသာစရာပါဘဲ VOA တို့ BBC တို့ သိရင်သတင်းပြန့်သွားမှာပါ…
ကျနော်တို့ who, အိုဘားမား. ဘီလ်ဂိတ်နဲ့ သက်ဆိုင်ရာ HIV/AIDS အဖွဲ့အစည်းများကိုအကြောင်းကြားကြည့်ပြီးပါပြီ။ ဘယ်သူမှစိတ်မ၀င်စားကြပါ။
မြန်မာ NGOs အဖွဲ့များနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံသို့လည်းအသိပေး အကူအညီတောင်းကြည့်ပြီးပါပြီ။ ပြန်စာတစောင်တောင်မလာပါ။ အယုံအကြည်မရှိကြပါ။
ကျနော်တို့ဆက်လက်ကြိုးစားနေပါတယ်။ တကယ်လက်တွေ့ပြနိုင်တဲ့အနေအထားရောက်လာရင် မြန်မာပြည်နှင့် မြန်မာပြည်သူများပါ ဂုဏ်တက်စေနိုင်မည်ဟုလည်းယုံကြည်မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ နောက်နောင် ဒီကိစ္စနှင့်ပတ်သက်လို့ ပိုမိုသိရှိ။ ဆွေးနွေးလိုလျှင် lubo601@gmail.com, marmot.nupo@gmail.com ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။